Ndeupi mutauro weNgirozi dzeKudenga ▷ ➡️ Ziva Pamhepo ▷ ➡️
Chii chinonzi mutauro weNgirozi dzeKudenga
Chii chinonzi mutauro weNgirozi dzeKudenga. Mutauro wengirozi unotaurwa kamwe chete muBhaibheri. Kunyange zvakadaro, ndima iyi inotsanangura kuti rudo runokosha kupfuura kutaura mitauro yakawanda inozivikanwa uye isingazivikanwi. Mutauro wengirozi unomiririra mitauro isingazivikanwi.
Kana ndikataura mitauro yevanhu neyengirozi, uye ndisina rudo, ndinosvika pakuva sesimbi inorira, kana makwakwakwa esimbi anorira.«. 1 VaKorinte 13:1
1 Ngirozi dzine mutauro wadzo here?
2 Pauro airevei paakati “rurimi rwengirozi”?
3 Ndiani ane chipo chekutaura mutauro wengirozi?
Ngirozi dzine mutauro wadzo here?
Hatina kukwanisa kutaura chii mutauro weNgirozi dzeKudenga, sezvo muBhaibheri chete ngirozi dzinoratidzwa dzichiendesa mashoko mukati mitauro yainzwisiswa nevanhu. Iko hakuna kutaurwa nezve mitauro mingani iyo ngirozi dzinotaura, kana kuti dzine mumwe kana kupfuura mitauro yavo. Bhaibheri rinonyanya kukoshesa ukama huri pakati pevanhu naMwari, kwete ngirozi.
MuBhaibheri, ngirozi dzinotaura na taura shoko rinobva kuna Mwari kuvamwe vanhu, vachishandisa mitauro yakarovedzeka, kana kuti kurumbidza Mwari.
«Murumbidzei imwi vatumwa vake vese;
Murumbidzei, imi hondo dzake dzose.—Pisarema 148:2
Hatizivi kana ngirozi dzine mutauro unokosha wokurumbidza Mwari.
Pauro airevei paakati “rurimi rwengirozi”?
Pauro akanga achitsanangura izvozvo chinonyanya kukosha kusaziva mitauro yakawanda, chinonyanya kukosha kuve nerudo. Vanhu vechechi yeKorinde vaikoshesa zvikuru kungwara uye kuratidzwa kwekunamata. Izvi zvese zvaive zvakanaka, asi zvine kukosha chete kana tichidanana. VaKristu vomuKorinde vakanga vasingaratidzi rudo.
«Uye kana ndaiva nechiporofita, uye ndikanzwisisa zvose zvakavanzika nesainzi yose, uye kana ndaiva nokutenda kwose, nenzira yokuti ndakafambisa makomo, uye ndisina rudo, handisi chinhu.
Kunyange ndagovera varombo zvose zvandinazvo, kana ndikaisa muviri wangu kuti ndipiswe, ndisina rudo, hazvindibatsiri chinhu.” 1 VaKorinde 13: 2-3
Muchikamu chino, kutaura "ndimi dzevanhu" kunomiririra njere, tsika. Kutaura "mutauro wengirozi" kunofananidzira zvemweya, kubatana nemweya.
Ndiani ane chipo chekutaura mutauro wengirozi?
Hapana panotaurwa muBhaibheri nezvechipo chekutaura nendimi chine chekuita nemutauro wengirozi. Naizvozvo, hatizivi kana kutaura nendimi kunoreva mutauro wevatumwa .
Vamwe vanhu vane chipo ichi vanotaura mitauro inonzwisiswa nevamwe vanhu, izvo zvinojekesa kuti havatauri mutauro wengirozi. Uyewo, vamwe vanhu vanotaura mitauro isingazivikanwe, uye Bhaibheri haritauri kuti mitauro ipi. Inongotaura kuti zvakavanzika, izvo Mwari chete anonzwisisa, haitauri kuti ngirozi dzinonzwisisawo.
«Nokuti unotaura nendimi haatauri kuvanhu, asi kuna Mwari; nokuti hakuna unomunzwisisa, kunyange achitaura zvakavanzika noMweya;. 1 VaKorinte 14:2
Uye zvino toziva zvazvinoreva Ndeupi mutauro weNgirozi dzeKudenga, tinogona kunzwisisa shoko raMwari zvishoma. Kana iwe uchida kuziva Ndeapi marudzi gumi nemaviri aIsraeri, ramba uchishanyira webhusaiti yedu chemada.online kuitira kuti usarase tsanangudzo.
Chii chakasiyana pakati pemweya nemweya
Ndeipi iri nhevedzano yokuverengwa kwenguva yamabhuku eBhaibheri